တစ်ဦးက TWITTER မြှင့်တင်ရန်လုပ်နည်း - တွစ်တာ - 2019
တစ်ဦးက Twitter account ကိုမြှင့်တင်ဖို့ကိုဘယ်လို
ကွဲပြားခြားနားသော Operating System နဲ့နှစ်ခုမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအကြားဓာတ်ပုံခွဲဝေမှုမကြာခဏအသုံးပြုသူများအတွက်အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်စေသည်။ နည်းလမ်းများစွာအတွက်ဤပြဿနာကိုထွက် sort ။
အန်းဒရွိုက်ဖို့အတွက် iOS ကနေဓါတ်ပုံတွေကိုလွှဲပြောင်း
အဲဒီ operating systems အကြားဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်းအတွက်အဓိကအခက်အခဲအင်္ဂါရပ်ကို iOS စစ်ဆင်ရေးတချို့ရှိနေပါတယ်။ တိုက်ရိုက်ကိရိယာ image ကိုလွှဲပြောင်းရန် devices များနှင့်အတူခက်ခဲသည်, သို့သော်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖော်ပြထားတဲ့နည်းစနစ်များအတွက် Third-party software ကိုသုံးပြီးနှုနျးဖို့ရှိသည်။
Method ကို 1: iOS ကိုရွှေ့ရန်
iOS ကိုမှအန်းဒရွိုက်နှင့်အတူသွားကြဖို့မကြာခဏအသုံးပြုတဲ့ OS ကိုနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်များ၏အဆင်ပြေဘို့ဒီဇိုင်းရိုးရှင်းတဲ့လျှောက်လွှာ။ အသုံးပြုသူအပြန်အလှန်အတူစတင်နိုင်ရန် Android ပေါ်မှာတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်, အဲဒီနောက်အောက်ပါလုပ်ဆောင်:
Android အတွက် iOS ကိုဒေါင်းလုပ်ရွှေ့ရန်
တူညီသော Wi-Fi ကွန်ယက်မှ device ကိုချိတ်ဆက်ပါ။
သင့်ရဲ့ iPhone ပေါ်မှာပွင့်လင်းချိန်ညှိမှုများ, select လုပ်ပါ "ဒီပရိုဂရမ်များနှင့်အချက်အလက်" နှင့်စာနယ်ဇင်း «က Android ကနေရွှေ့ဒေတာ».
ထိုအခါ Android ပေါ်မှာ program ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်း, အိုင်ဖုန်းပေါ်သော code များရိုက်ထည့်ပါ။
အသစ်က window ထဲမှာ, သင်သည်ဤဓာတ်ပုံကိုများအတွက် (မရွှေ့ချင်ဖိုင်တွေကို select လုပ်ပါ « Camera Roll တွင်»), ထို့နောကျစာနယျဇငျး «နောက်တစ်ခု».
Method ကို 2: Google ဓါတ်ပုံများ
Android ထုတ်ကုန်၏အတော်များများကဂရပ်ဖစ်ဖိုင်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ဘို့အခြေခံ tools များထဲကတစ်ခုဖြစ်သည့် Google ဓါတ်ပုံများ app ကိုရှိသည်။ အလိုအလျောက်မိုဃ်းတိမ်သိုလှောင်မှုအတွက် data တွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့ဖြစ်နိုင်ကတည်းကဒီဒစ်ဂျစ်တယ်ဓါတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုလွှဲပြောင်းရန်အရှိဆုံးအဆင်ပြေနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကမဆိုကိရိယာမှဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်နှင့်အတူတူပင်အကောင့်သို့ log ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်အောက်ပါအချက်များကိုလိုအပ်:
Android အတွက် Google ဓါတ်ပုံများ Download
iOS အတွက် Google ဓါတ်ပုံများ Download
app ကိုဖွင့်ပါနှင့်လက်ျာတစ်ဦးပွတ်ဆွဲယူပါ။ ပေါ်လာသော Menu ထဲမှာ, select လုပ်ပါ "Settings" ကို.
ပထမဦးဆုံးကို item ဖြစ်ပါသည် "ကို Back up & ထပ်တူပြုခြင်း", ထိုသို့ဖွင့်လှစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
သင့်အကောင့်သင်၌ log အကယ်. အလိုအလျှောက်ချိန်ကိုက်မှု setup ကိုဖြစ်ပေါ်ပါဘူး, ထို့နောက်ကို item ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ "ကို Back up & ထပ်တူပြုခြင်း".
ထုတ်လုပ်ရှိသမျှကိုပစ္စည်းများကိုသိမ်းဆည်းထားမည်သည့်အတွက်အကောင့်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒါက download, သတင်းအချက်အလက်ကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။
Method ကို 3: တိမ်တိုက်န်ဆောင်မှုများ
Yandex.Disk Dropbox, Mail.ru တိမ်တိုက်နှင့်အခြားသော: ဒီ option ကိုအသုံးပြုရနိုင်သောအစီအစဉ်များ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကပါဝငျသညျ။ အောင်မြင်သောစစ်ဆင်ရေးများအတွက်, နှစ်ဦးစလုံး devaysa မှန်ဆောင်မှုများ၏မိုဘိုင်းဗားရှင်းသတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်အတူတူပင်အကောင့်အောက်မှာလော့ဂ်။ အဲဒီနောကျဆိုဆက်ပြောသည်ဒြပ်စင်အခြားစက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Mail.ru တိမ်တိုက်များ၏ဥပမာပေါ်မှာဤအကြောင်းကိုပြောကပို:
Mail.ru တိမ်တိုက် Android အတွက် Download
Mail.ru တိမ်တိုက် iOS အတွက် Download
(ဒီဥပမာက Android အတွက်) ကိရိယာပေါ် app ကိုဖွင့်ပါနှင့် icon ကို click «+» မျက်နှာပြင်ရဲ့အောက်ဆုံး။
ပေါ်လာသော Menu ထဲမှာ, select လုပ်ပါ "ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကို Add".
အဆိုပါပြခန်း မှစ. နှင့်အတူလိုအပ်သောမီဒီယာဖိုင်ကိုရွေးပါ, ထို့နောက်ဝန်ဆောင်မှုသို့တိုက်ရိုက် load မှစတင်။
Method ကို 4: PC ကို
ဒီဂျခုနှစ်, ကွန်ပျူတာ၏အကူအညီနှုနျးရန်လိုအပ်ကြောင်း။ သငျသညျ (က Android နှင့်အတူဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမကြာခဏပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့) iPhone ကနေ PC ကိုဖိုင်များကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပထမဦးဆုံးလိုအပ်ပါဘူး။ သငျသညျကို iTunes သို့မဟုတ်အခြားအထူးပြုအစီအစဉ်များနှင့်အတူဤလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဆက်ဖတ်ရန်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သီးခြားဆောင်းပါးထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့သည်:
သင်ခန်းစာကိုဘယ်လို iOS ကိုမှကို PC ကနေဓါတ်ပုံတွေကိုလွှဲပြောင်းရန်
ထိုနောက်မှကိုသင့်ကွန်ပျူတာကို Android-smartphone ကိုချိတ်ဆက်မှာဖြစ်ပြီး device ကိုမှတ်ဉာဏ်အတွက်လက်ခံရရှိမီဒီယာဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်း။ ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းထွက်သယ်ဆောင်ရန်ကခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် resolution ကိုပေးသာလိုအပ် "အိုကေ" မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ pop-up window ကို။
မိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေသင်ကွဲပြားခြားနားသော operating system မြားပျေါတှငျသုံးနိုငျနည်းလမ်းအနည်းငယ်ကနေလွှဲပြောင်းဓာတ်ပုံများလုပ်ဆောင်စေရန်။ ဆုံးရိုးရှင်းတဲ့ - အစီအစဉ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်း, တစ်ဦးကို PC မှတဆင့် device မှ device ကိုမှတိုက်ရိုက်ကူးယူ iOS ကိုအဓိကကြောင့်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်နေစဉ်။
ဗီဒီယို Watch: Eeti Latest Hindi Dubbed Action Movie 2019. New Blockbuster Movies Bollywood (အောက်တိုဘာလ 2019).
https://termotools.com my.termotools.com © တွစ်တာ 2019